3 Nin oo Lagu Dilay Bartamaha Magaalada Galkacyo
Axad Sept 14, 2003
Wararka naga soo gaaraya magaalada Galakcyo waxay sheegayaan in maanta saacaddu markay ahayd 12:00 duhurnimo ay niman hubaysan oo ka tirsan beesha reer Nimcaale (sacad)ay si gaadmo ah magaalada bartamaheeda ku dileen labo nin oo ah beesha Saleeman Cabdalle (Dir) islamarkaana xabadihii ay uwadeen ay haleeshay nin kale oo taagnaa agagaarka ragga lala beegsaday toogashada ninkaasoo aan ka tirsanayn labada beelood oo xurguftu ka dhaxaysay.
Sida lawada ogsoonyahay dagaal dad badani ku hoobteen ayaa udhaxeeyay beelaha reer nimcaale(sacad) iyo saleemaan cabdalle(Dir)kuna dhexmarayay dooxada golol laakin hadda waa markii uhoreysay oo dagaalka lasoo dhexgaliyo magaalada galkacyo labada beelood wada deggan yihiin.
Warku wuxuu intaa ku darayaa in magaaladu kacaday oo laga cabsi qabey beesha laga dilay ragga inay iyana samayso aargoosi oo ay qalabqaateen. Masuuliyiin iyo odayaal ka tirsan degaanka ayaa aad ucambaareeyay falkaas fulaynimadu ku jirto oo dagaaladii miyiga soo dhex galiya magaalo camiran oo lawada degan yahay,waxayna ka codsadeen jufada reer nimcaale inay gacanku dhiiglayaasha soo qabtaan si sharciga loo horgeeyo isla markaana looga fogaado kala qax ku yimaada magaalada.
warkii udambeeyay waxay sheegayaan in nimankii wax dilay ay u carareen dhanka magaalada hobyo sarkaal ka tirsan ururka USC/SNA Caato ayaa noo sheegay in lagu raad joogo dhagarqabayaasha,kana codsadeen beesha gaadmada lagu waxyeeleeyay ee saleman cabdalle iyo qolada kamada(qasdi la,aanta) ninku uga dhintayba ay ka warsugaan oo xasilaanta ilaaliyaan inkasstoo magaalada dhiilo xuni ka jirto.
Dhacdo kale waxaa maalintii jimca ahayd lagu dilay tuulada beyra oo ka tirsan 20km waqooyi ka xigta magaalada galkacyo nin oday ah una dhashay beesha sacad isla markana waxaa lagu dhaawacay 2 qof oo kale waxaana gaystay baa la yiri dablay ka tirsan beesha cumar maxamuud. waxaad moodaa gobalka mudug inoo u qasanyahay sida xamar oo kale oo dilku macno ku fadhiyin.